သဘာဝနဲ့အညီတိုက်ရိုက် - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ဗီဒီယိုကိုဖုံး: Youtube ကိုကြော်ငြာ Audi quattro
Georgi Georgiev နှင့်အတူအင်တာဗျူး - Chernia
ယနေ့တွင်ငါသည်သင့်ကိုသူသဘောသဘာဝနဲ့အညီနေထိုင်ကြောင်းသိသည်အတိုင်းမကြာမီသငျသညျသူ့ကိုကွညျ့ရှုအဖြစ်သင်ဘယ်သူကိုအကြောင်းကိုလူတမိတ်ဆက်ပေးတော်မူမည် သငျသညျသူ့အလုပ်သစ်တောများ, ကျောက်ခဲများ, ထိပ်အလယ်၌လက်ျာဘက်ရှိကြောင်းကိုငါသိ၏။ အဘယ်သူ၏ကြည့်သငျသညျငွိမျငွိမျခံစားရနှင့်သူ၏ရှေ့မှောက်တွင် secure စေသည်လူ။ အမြဲတမ်းအပြုံးနှင့်အတူသင်ကူညီနှငျ့သငျအကြံဥာဏ်တချို့အပိုင်းအစကိုပေးမည်သောသူသည်ကား, သငျသညျသို့အာဏာကိုဆောင်ကြဉ်းနှင့်ပင်သင်၏အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်မတဦးတည်း။ , တောင်ပေါ်မှာသွားသူတို့ကိုအကြံဥာဏ်အရှိဆုံးတိကျမှုအပိုင်းအစပေးခြင်းနှင့်သူတို့၏လမ်းပြဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူလမ်းပြ - ဟုတ်ကဲ့, ဒီ Georgi Georgiev-Chernia တစ်ခုသိမ်းပိုက်အဖြစ်မအတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ ငါသူ့ကိုနတ်မင်းကြီးလူတစ်ဦးကိုစဉ်းစား - သူထူးခြားသောအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအံ့သြဖွယ်သောအရပ်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာသူမြေပြင်ပေါ်မှာခိုင်မြဲစွာသည်သူ၏ခြေနှစ်ဘက်စုံသူဖြစ်၏။
Ogi Natchev ဘို့ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag:
Georgi Georgiev - Chernia:
ငါသည်တဖြစ်ကြောင်းကို တောင်တပြင်လမ်းညွှန် နီပေါ၌ငါလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အုပ်စုများနဲ့လူကိုလမ်းပြမသာ။ Off-ရာသီခရီးသွားဥရောပတိုက်တွင်စတင်သည်အခါ, နီပေါ၌တက်ကြွစွာရာသီနှင့်ဤရှုထောင့်ကနေအချိန်ဖြစ်ပါသည်, ငါအရမ်းအဆင်ပြေကိုရှာပါ။
© Georgi Georgiev - Chernia
လူတိုင်းမထားသကဲ့သို့ငါသည်လည်းတစ်ဦးအပျော်တမ်းဝါသနာအိုးအဖြစ်တောင်ကြီးတောင်ငယ်အားကစားနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်စတင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လူတွေတက်ပြီးကိုမွငျလြှငျ, ကျောင်းထဲကနေ Vratsa အတွက်ခရီးစဉ်အပေါ် ရှိ. , ငါကချစ်တော်မူ၏။ လာမည့်ရက်သတ္တပတ်ငါတစ်တောင်တက်ဖွစျလာနိုငျဘယ်လိုမေးရန်တယောကျတညျးရှိပြန်လေ၏။ ငါကနဲ့စတင်နည်းနည်းအားဖြင့်ဒါနည်းနည်း။ တကယ်တော့ငါ့အကြီးမြတ်ဆုံးလေ့ကျင့်ရေးရတယ်ဘယ်မှာထို့နောက်ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့် Kremikovtsi အဖြစ် Akademik ဆိုဖီယာ - ငါဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကလပ်အသင်းတွေအများကြီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ ငါသည်တပရော်ဖက်ရှင်နယ်တောင်တက်သမားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်မှာဒါဟာရှိ၏။ ထိုအခါငါငါသည်လည်းခုနစ်နှစ်သုံးစွဲခြင်း, ထိုနောက်ငါလမ်းညွှန်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အပွင့်လင်းစျေးကွက်အပေါ်ထွက် သွား. အဘယ်အရပ်သည်ကျောင်း Maliovitsa တစ်ခုနည်းပြဆရာအဖြစ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းစာအုပ် Maliovitsa ဥရောပတစ်မူထူးခြားတဲ့ site ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ယခုလမ်းညွှန်ဖြစ်ခြင်းငါသည်လည်းအကြောင်းရင်းနှစ်ခုအဘို့ဤမျှလောက်လုပ်နေတာ, လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ပထမဦးစွာတောင်တက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းချင်သူတွေကို၏ပြင်ဆင်မှု၌ကြီးစွာသောလေဟာနယ်လည်းမရှိ။ အကြောင်းမူကား, ထိုကဲ့သို့သောပြိုလဲဆုံးရှုံးမှုဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဖြစ်လုံးဝလိုအပ်သောသည်အဘယ်အရာအားဖြင့်ဆောင်းရာသီတွင်စတင်ကာရေခဲမြစ်အပေါ်ရွေ့လျား, etc ပြီးတော့အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါသည်သူတို့၏အဆင့်ကိုမြှင့်ချင်သူတွေကိုသင်ပေး။
ဆောငျးရာသီနှင့် Avalanche ၏စကားပြောသောငါသည်အရာသည်အလွန်အစွန်းပေါ်သောအခါဥစ္စာအချို့ကိုပုံပြင်များ, အကြောင်းသင့်ကိုတောင်းဆိုနေတာကိုမဆီးတားနိုင်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအများအပြား Avalanche သိ ...
တအန္တရာယ်များပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အလုပ်အကိုင်ရှိပြီးအခါ, သဘောသဘာဝနှင့်အတူရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံတတ်၏။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အဘယ်သူကိုမျှမမေးလျှင်, သူတို့သည် ... ဝေမျှနိုင်ပါတယ်ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခြေအနေကိုဆိုးရွားတိုက်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အထင်သေးမှုကြောင့်ကောင်းသောအကဲဖြတ်မရှိခြင်း၏တွေ့ကြုံတတ်၏။
အဆိုပါအကြောင်းပြချက်အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါသည် - ရည်မှန်းချက်, ပုဂ္ဂလဒိဋ္ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုဆွေးနွေးရန်မည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကအတော်လေးသဘာဝအလျောက်ထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာဖြစ်ပျက်ကြောင်းရှာပါ။ အဘယျသို့ minimize လုပ်ဖို့ငါ့ကိုရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ငါလူတို့နှင့်အတူဖြစ်ကြောင်းကိုသည့်အခါထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများသို့မကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးထူးချွန်ကိုလိုက်ရန်, တဦးတည်းရဲ့အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးရန်လိုသည်အခါ, တဦးတည်းစွန့်စားမှုများ၏နယ်နိမိတ်အထိပြောင်းရွှေ့ရသည်။
သငျသညျလူတို့နှင့်အတူနေသည့်အခါမူကား, သငျသညျအဆုံးသည်နှင့်သင်အန္တရာယ်ခံစားရသောအခါသင်ကပင်တောင်တက်, ကျမ်းပိုဒ်ကိုသင်လုပ်နေလုပ်နေကြောင်းဘာမှကိုပယ်ဖျက်သင့်ပါတယ်ဘယ်မှာအတိအကျတစ်ဦးကအလွန်ရှင်းပါတယ်အကဲဖြတ်စေရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကလမ်းညွှန်များ၏အလုပ်ဖြစ်ပါသည်, ငါ့အလုပ်ပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါလမ်းညွှန်မဟုတ်ခဲ့အများစုမှာသည့်အခါထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာ, ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြပေမယ့်အစားငါအားကစားနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်။ တခါတရံလည်းလမ်းညွှန်ထဲမှာဖြစ်ပျက်ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုပဲမလွှဲမရှောင်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ငါသည်ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်နှစ်ခုကအရမ်းလေးနက်ဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့ပါပြီ။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးကိုယ့်လမ်းညွှန်နှင့်အတူဆက်ဆံမခံခဲ့ရသည့်အခါဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအခြားသူတွေဝေးငါ့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခဲ့ကြသည်, တဦးတည်းသူငယ်သေ၏, တစ်နွယ်ဖွားစဉ်အတွင်းပြင်သစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်းတွင်, 90s ၌ရှိ၏။ ရဟတ်ယာဉ်ကိုငါ့ကိုကယ်နှုတ်ဆီသို့ရောက် လာ. , စဉ်တွင်ဒါနဲ့, ကျောက်တစ်ခြံ၌ငါးရက်သုံးဖြုန်းခဲ့ကြရသည်။
ဒါဟာငါတော်တော်လေးနက် frostbite ခဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်သောအရာတို့ကိုသင်တန်းသားများကို၏အမှားကြောင့်မဟုတ်ပါဖြစ်ပျက်သည့်အခါသူတို့အအချိန်လေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်မကောင်းတဲ့ကံ၏ရလဒ်အဖြစ်။ တစ်ဦးဖေးကအပေါ်ထောက်ခံမှု tools များနှင့်အတူ, ဖဲ့, ဒါကြောင့်ဘာမျှမအမှုကိုပြုနိုင်ပါတယ်။ လဲကျသူကောင်လေး, သခင်ဘုရားနှင့်အတူအပေါငျးတို့သကြိုးကြောင့်ငါငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ထဲကမထွက်ရ 40 မီတာငါ့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခဲ့ကြသည်သောလူ, ပြန်လာနိုင်နိုင်ဘူး ...
ဒီအလုပ်အကိုင်ရှိခြင်း, ငါသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုလုပ်နေတာ၏, ဒါပေမယ့်လည်းဆိုတော့မဟုတ်ရင်ကခက်ခဲသွားတွေ့ပါမယ်လို့သောနေရာများသို့သွားရောက်နိုင်ဖြစ်ခြင်း၏, ပထမဦးဆုံးမင်္ဂလာခံစားရသည်။
ငါ၏အမှုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါအဖြစ်ရပြီငါကြိုက်တယ်ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းရာမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ငါပျော်မွေ့နှင့်အတူပြန်သွားပြီးနေရာများရှိပါသည်။ အကယ်စင်စစ်ဤသူတို့တွင်နီပေါဟိမဝန္တာဖြစ်ကြသည်။ ငါသေချာများအတွက်အဲလ်ပ်တောင်တန်းကိုချစ်ပေမယ့်ငါနည်းပါးလာလူတွေရှိပါတယ်နေရာများသို့သွားလို။ တိုင်းတောင်တက်သမားသည်သူ၏အဆင့်ကဘာလဲဆိုတာထွက်ရှာနိုင်ရန်အတွက်ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သည်သော Chamonix ချိုင့်ဝှမ်းမတူပဲဒီတော့ပေါ်ပြူလာမဟုတ်သောအဲလ်ပ်တောင်တန်းအတွက်သောနေရာများ, ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ဒီအရပ်တို့ကိုလူတွေကအများအားဖြင့်သွားပါရှိရာနေရာတွေကနေ, ပင်မစီးကြောင်းမှတစ်ချိုးကိုဆက်ကပ်။ ဤနည်းအားအတွေ့အကြုံအများကြီးပိုပြီးပြည့်စုံရာဖြစ်ပါတယ်။
နီပေါတောင်တက်နှင့် Alpine ၏အခြေခံသည်။ ယင်း၏အားကစားရှုထောင့်အနားမှာ, တောင်တက်, သင်တန်း, မသိသောအဘို့ရှာဖွေသည်။ အသစ်ကမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအသစ်အထွဋ်, ဤထိပ်အသစ်လမ်းကြောင်းများအတွက်တစ်ဦးကရှာဖွေရေး။ နီပေါကြီးမားတဲ့အလားအလာရှိပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်: နီပေါအစိုးရတက်နိုင်ပြီးယခုအချိန်အထိတက်ကြပြီမဟုတ်ကြောင်း 104 အသစ်အထိပ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
လုံးဝ။ ၎င်းတို့အနက်နည်းပညာပိုင်းလည်းအတော်လေးခက်ခဲသူတွေကိုတက်နှင့်ခံရဖို့လွယ်ကူသောထိပ်ရှိပါတယ်။ တဦးတည်းသစ်ကိုတစ်ခုခုလုပ်နေတာနဲ့တူခံစားရမယ်ဆိုရင်ဒါ, နီပေါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ရာအရပျဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြင့်၎င်း၏လူနေမှုစေသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး, အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပြီးအများကြီးလျော့နည်းအကုန်အကျလည်းမရှိတစ်ခုခုစည်းရုံးရေး။ ဒီရှုထောင့်ကနေ, နီပေါတိုင်းအဆင့်တွင်ကစားရန်အလွန်ကောင်းသောလယ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးကိုအခြားအရာကလူနှင့်အတူအဆက်အသွယ်လည်းမရှိ။ ဟုတ်ပါတယ်, ထိုအရပ်၌ 20th နှင့် 21st ရာစုအခရီးသွားလုပ်ငန်းအားဖြင့်ထိမိသောနေရာများဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်လျော့နည်းသွားရောက်ခဲ့ပြီးချိုင့်ထဲမှာလူတွေအများကြီးပိုအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြသည်။ အရာအားလုံးအများကြီးရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ပိုပြီးအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာတည်သည်ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အနှစ်သာရရောက်ရှိဖို့အများကြီးပိုလွယ်သည်။ ကျနော်တို့လူတိုင်းအတွက်စံပြအောက်ပါအတိုင်းရသောတစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျ။ လူတိုင်းကပိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့တူနေထိုင်ပါတယ်။ ဘာမျှမကအကြောင်းမကောင်းတဲ့ရဲ့, ငါ့မှားယွင်းတဲ့မရကြဘူး! အဲဒီမှာသို့သော်ထိုသို့သောအမှုကိုအဘယ်သူမျှမလည်းမရှိ။ ငါကလည်းသကဲ့သို့သင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှစတင်ပြောဆိုလာသောအခါ, သင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာသည်သူ၏အနှစ်သာရရောက်ရှိဖို့။
တောင်တက်, တောင်အားကစားအားလုံးထဲတွင်ကဲ့သို့အလွန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အားကစားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့တဦးတည်းအမိန့်အောက်ပါအတိုင်းကြောင်းကောင်းလှ၏။ ဤသည်ပေါ့ပါးသောအရာတို့ကိုအတူစတင်ပိုပြီးခက်ခဲသူတွေကိုဆီသို့ဦးတည်ရွေ့လျားပြီးတော့အမြင့်ဆုံးတောင်များမှာရည်ရွယ်ထားစတင်ဆိုလိုသည်။ နေရာတိုင်းငါအလွန်နိမ့်တောင်တက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူလူဖြည့်ဆည်း။ သူတို့ကအမျိုးမျိုးသောအကျပ်အတည်းအခြေအနေများတွင်ကြံဖန်မှအသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သောအသံအတိုးအကျယ်ကိုသိမ်းယူကြပါဘူး။ သို့သော်သူတို့သည်ကောင်းသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးရှိသည်နှင့်သူတို့ကဒီမြင့်မားသောတောင်ပေါ်တက်ပြီးလုံလောက်သည်ဟုမထင်။ သငျသညျဥပမာတစ်ခုလမ်းညွှန်နှင့်အတူ, တစ်စုံတစ်ဦးကိုအတူကလုပ်ချင်လျှင်လုံလောက်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းကလုပ်နေတာသည့်အခါဒါပေမယ့်မလုံလောကျပါပဲ။ ဒါနဲ့လူတွေကိုအကြံပေးသောအရာကိုသူတို့အပေါ်တည်ဆောက်သင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ အနည်းငယ်သာတည်ဆောက်အပေါ်အားဖြင့်အနည်းငယ်သာ။ ဒါဟာအသက်ရှည်သမျှနယ်ပယ်၌ဤကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါအချက်တောင်တက်နှင့်တောင်ကြီးတောင်ငယ်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ပျက်ကွက်တာကိုပိုပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Georgi Georgiev အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ - Chernia:
Georgi Georgiev ဖြင့် Video
သဟဇာတ, သဘာဝ, နှငျးလြှော, အားကစား | | rating:5/ 30